China Alloy kwakakurudzira simbi jira Kugadzira uye Fekitori | Derunying
Alloy kwakakurudzira simbi jira
Kushanda: Zvezvakanaka muchina zvikamu
Rudzi urwu rwechigadzirwa rwunogadzirwawo pachishandiswa nzira yekupisa, asi kana yangobuda mutangi, inozopisa kusvika kuma500 ℃ kugadzira mafirimu matete ezinc nesimbi. Iri rakapetwa jira rine yakanaka yekumesa kuomesa uye weldability.
Yakakurudzira yekugadzira tambo uchishandisa yakanyanya yepamusoro United States simbi yekugadzira maitiro, iwo makuru maratidziro echigadzirwa ndi 0.15-1.5mm * 800 ~ 1250mm. Iyo yekugadzira tambo inoshongedzerwa nemwaranzi yeinoramba ichiwedzera annealing vira; Kuchenesa chubhu mhando yakatwasuka jet frequency induction kupisa ceramic zinc poto; ina mhango yemhepo banga; muchina wechiedza; straightening muchina uye zvimwe zvigadzirwa zvemberi, Isu takapayona neiyo patent tekinoroji: tsvina kupisa mashandisiro mudziyo, iyo ichaponesa yakawanda simba uye kuchengetedza nharaunda.
Iyo zinc uye alloy alloy layer inoumbwa mune yese yekupisa nekupisa kurapwa kweiyo simbi tambo ichipfuura iyo galvanizing yekugeza mvura. Iko kupfeka kunotaridzika kusviba grey pasina esimbi kubwinya. Zviri nyore kuti upfu panguva chisimba Kuumbwa kwacho. Izvo zvinoshanda kune iyo yekupfeka iyo inogona kuvezwa pasina kumwe kurapwa kunze kwekungochenesa kwakawanda.
Iwo magiredhi eakaumbwa alloy simbi anomiririrwa neArabic manhamba uye akajairwa makemikari element zviratidzo. Maviri manhamba echiArabic anoshandiswa kumiririra zvinorehwa kabhoni zvemukati (x / 10000) uye nzvimbo pamusoro pebanga. Iyo
zvemukati zvezvinhu zvekumisikidza zvinomiririrwa seinotevera: Kana iyo yepakati yezvinyorwa iri pasi pe1.50%, iyo nhamba yegiredhi inongoratidzira chinhu uye kazhinji hairatidze zvirimo; Kana avhareji zvemukati zviri 1.50% ～ 2.49%, 2.50% ～ 3.49%, 3.50% ～ 4.49%, 4.50% ～ 5.49%, 2, 3, 4 uye 5 zvakanyorwa zvichitevera zvinhu zvinoteedzera. Semuenzaniso: Ivhareji yezvinyorwa zvekabhoni, chromium, manganese uye nesilicon yeakaumbwa alloy simbi iri 0.30%, 0.95%, 0.85% uye 1.05%. Kana S uye P zvemukati zviri -0.035%, giredhi rinoratidza "30CrMnSi". Yakakwira-giredhi mhando dhizaini alloy simbi (S uye P zvemukati ≤0.025%) inoratidzwa nekuwedzera "A" kugiredhi. Semuenzaniso: "30CrMnSiA". Super-giredhi mhando dhizaini alloy simbi (S≤0.015%, P≤0.025%) inoratidzwa nekuwedzera "E" kugiredhi. Semuenzaniso: "30CrM nSiE". Iwo magiredhi akasarudzika eakaumbwa esimbi simbi inowedzera chiratidzo chinoratidza chigadzirwa chigadzirwa muTafura 1 kune yegiredhi musoro (kana muswe). Semuenzaniso, iro giredhi re30CrMnSi simbi yekukwirisa sikuru inoratidzwa seML30CrMnSi. 2. Iyo inomiririra nzira yealloy chitubu simbi giredhi yakafanana neyakaumbwa chiwanikwa simbi. Semuenzaniso: Ivhareji yezvinyorwa zvekabhoni, silicon uye manganese ndeye 0.60%, 1.75% uye 0.75% yesimbi yesimbi uye giredhi inomiririrwa se "60Si2Mn". Kune yakakwira-giredhi yemhando yepamusoro simbi, chiratidzo "A" chinowedzerwa kugiredhi uye giredhi inomiririrwa se "60Si2MnA".
Pashure: Hot Dip kwakakurudzira simbi yairema
Zvadaro: Mhando dzekunamatira-PE